Pyit Time Htaung - Page 39 of 53 - Daily News
ကိုဗစ်ကြောင့် ခံစားရမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများ….
Covid ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်သလား ..? ကပ်ရောဂါကြီးတစ်ခု အပြီးမှာ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး စတဲ့နောက်ဆက်တွဲ အကျိုး ဆက်တွေကတော့ ခံစားရစမြဲပါ ။ Covid-19 ကြောင့်အနည်း […]
တရုတ်က မြန်မာ အပါအဝင် အာရှနိုင်ငံ အချို့တွင် စစ်ရေးအရ အခြေစိုက်ရန် အစီအစ ဉ်ရှိကြောင်း အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန က ကွန်ဂရက် တွင် တင်ပြ
တရုတ် အစိုးရ အနေဖြင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ ကို အုပ်စိုးနိုင် ရန် အတွက် ထောက်ပို့ ကွန်ရက် တခု တည်ဆောက်နေကြောင်း အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ပြုစု သည့် တရုတ် […]
” ကား အမည်ပြောင်း အခွန် ၃ % ဘယ်တော့ နောက်ဆုံးလဲ မေးနေ ကျတဲ့ မိတ်ဆွေများ အားလုံး အတွက် “
၁-၁၀-၂၀ မှစ ၍ ကား အမည်ပြောင်း အခွန် ၃ % မှ ၆ % သို့ အခွန်ဦးစီး ဌာန မှတိုးကောက် ပါမည် ။ (ကားအမည်ပြောင်းဆောင်ရွက် မည့် မိတ်ဆွေများခဗျ) […]